Dhacdo - AfricArXiv
Nagala soo qaybgal Chatbot Africa & Conversational AI Summit
Shirka loo yaqaan 'Chatbot Africa & Conversational AI Summit' waa shir isweydaarsi iyo bandhig loogu talagalay xirfadleyda warshadaha, kuwa qaata wada hadalka AI, Chatbots, hadalka ama tiknoolajiyada codka, Naqshadeynta UX, NLP & Kaaliyaha Virtual.
AfricArXiv waxay taageertaa shirarka 'Chatbot Africa & Conversational AI Summit' 2021
Shir-madaxeedku wuxuu dabooli doonaa codsiyada Wadahadalka AI, Chatbots, Voice, Kaaliyeyaasha Virtual, iyo Naqshadeynta Wadahadalka ee qaybo kala duwan. Diiradu waxay saaran tahay sida shirkaduhu u adeegsanayaan sheekooyinka iyo wada hadalka AI si loo yareeyo kharashka loona kordhiyo dakhliyada loona baaro isbeddellada ugu dambeeyay, loo isticmaalo kiisaska, iyo in gadaal laga eego muuqaalka sida ugu fiican u shaqeynaya.
By Kooxda Chatbot Africa & AfricArXiv, 7 bilood 3 bilood horaantii
By AfrikArXiv, 9 bilood 4 bilood horaantii
Waxyaalaha muhiimka ah ee ka imanaya Faafinta Daabacaadda Furan
Horraantii toddobaadkan waxay ahayd wax lagu farxo in lagu soo bandhigo AfricanArXiv bandhigga 'Open Publishing Fest' si looga wada hadlo kaqeybgalayaasha su'aasha:
Maxaan ugu baahanahay bakhaar loogu talagalay Afrika?
By Jo Havemann, sano 1 4 bilood horaantii
TCC Africa oo bixinaysa tababaro onlayn ah
Xarunta Tababbarka ee Xiriirka ayaa bilawday bixinta koorsooyinka khadka tooska ah. Ms. Joy Owango, Agaasimaha Fulinta ayaa faallo ka bixisay in Tani ay qayb ka ahayd istiraatiijiyaddeenna sannadka 2019/2020, taas oo, aan u gudbinnay abaalmarinta Invest2Impact oo aan ku guuleysannay. Iyada oo ay taasi jirto waxaan ku faraxsanahay horumarkan waxaanan rajeynaynaa inaan taageerno cilmi baarayaal badan iyo aqoonyahanno ku saabsan sida aan u horumarin karno cilmi-baaristooda Akhri wax dheeraad ah…
By TCC Afrika, sano 1 4 bilood horaantii
Shir madaxeedka AfricaOSH 2020
Dib u soo noqoshadii bishii Abriil 2018, fikradda ah in la dhiso kaydka bakhaar Afrika ee furan ayaa ku dhashay shirkii ugu horreeyay ee AfrikaOSH ee lagu qabtay Kumasi, Ghana. Daah-ka-qaadista ayaa waxaa lagaga hadlay Ingiriisiga waxaana ka mid ah Nature Index, Quartz Africa, AuthorAID, iyo af-Faransiis Afro Tribune iyo Courrier International. Waan ku faraxsanahay inaanu dhawaaqno, Akhri wax dheeraad ah…
Categories Select Category Ogeysiis (11) Awood dhisida (7) Wadashaqeyn (27) COVID-19 (31) Dhacdo (6) Guud (9) Qalabka (1) Aqoonta asaliga ah (2) Wareysi (8) Kala duwanaanta luqadda (7) Furan Furan (36) Sayniska Furan (16) Iskaashiga ku dhawaaqida (2) Dib-u-eegista asxaabta (7) Podcast (1) Diyaargarow (11) Daabacaadda (14) Warbixin (1) Isgaarsiinta Sayniska (17) Soo gudbinta (7)
Baaritaan Afrikan ah AI Sirdoonka Artificial ASAPbio BlackLivesMatter BlackVoicesMatter Xarunta Sayniska Furan chatbot Covid-19 Wadahadalka Xawaaladaha Dijitaalka ah Baadhista Soo saarista cilmi baarista Afrika Eider Afrika Ururinta Joy Owango Jaamacadda Islaamiga ee Omdurman furan marin furan Wadaag furan Fur Khariidadaha Aqoonta furan dib u eegis kasta sayniska furan Qaab-dhismeedka Sayniska ee Furan OSF Dib-u-eegidda Aragga daabacaadda Dib u eegis daabacaadda PubPub dib u eegis deg deg ah Dib-u-dejinta Research Roadmap Isgaarsiinta Aqoonta Isgaarsiinta Sayniska ScienceOpen SDG2 Sudan Himilooyinka Horumarka Sare tcc-africa TCC Afrika tarjumaada Uganda Zero Hunger